Hevitra 6 handravahana aquarium | Ny trondro
Misy haingon-trano be dia be izay hevitra tsara handravahana aquarium, manomboka amin'ny vatolampy na tsorakazo ka hatramin'ny sary klasika misy tratra sy mpisitrika na azo eritreretina kokoa, toy ny mananasy nonenan'i SpongeBob.
Na izany aza, Tsy ny fisafidianana ireo haingon-trano ihany no tena tiantsika indrindra amin'ny aquarium ananako, fa koa ny fahalalana ireo izay tsy azontsika apetraka, ary koa ny fahalalana ny fomba fanadiovana azy ireo sy ny toro-hevitra momba ny haingo. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity izany rehetra izany. Ho fanampin'izay, mamporisika anao izahay hamaky ity lahatsoratra hafa ity manaingo ny fanambanin'ny aquarium anay raha te hanana hevitra bebe kokoa ianao.
1 Hevitra handravahana ny aquarium anao
1.1 Vatokely na fasika
1.3.1 Zavamaniry artifisialy
1.3.2 Zavamaniry voajanahary
1.6 Taratasy haingon-trano
2 Inona no tsy hatao anaty aquarium
2.2 Ireo singa voajanahary tsy voatsabo
2.3 Haingo tsy voaomana
3 Ahoana ny fomba fanadiovana ny haingon-trano
4 Torohevitra haingo
Hevitra handravahana ny aquarium anao
Tsy misy isalasalana, ny fanaingoana aquarium dia mety ho iray amin'ireo hetsika mahafinaritra indrindra, satria azontsika atao ny manazava ny fahitana ny aquarium antsika ary manary azy ho toerana tsotra misy vatokely efatra sy zavamaniry plastika malazo. Mifanohitra amin'izany aza, manana safidy maro isika eny an-tsena:
Vatokely na fasika
Dehner - vatokely an'ny ...
Ny fototry ny aquarium rehetra, ara-bakiteny, dia vatokely na fasika, izay apetraka eo ambany. Na dia miorina amin'ny vato aza ny vatokely (miaraka amin'ny endrika voajanahary na miloko kokoa, ary samy hafa ny habeny), ny fasika dia lavorary ho an'ireo trondro izay milevina ao anatiny na mandany ny ankamaroan'ny fotoanany any ambany any amin'ny fonenany. , toy ny eela.
Na izany aza, indraindray ny vatokely no vahaolana tsara indrindraindrindra ho fampiononana anay. Ohatra, ny iray amin'ireo fatiantoka fasika lehibe indrindra dia ny fanadiovana azy mavesatra be, ary mirona mankany amin'ny toerana rehetra, ka tsy maintsy soloinao matetika kokoa.
Ankoatra izany, amporisihina mafy ianao hisafidy fitaovana voajanahary, satria raha synthetic na vera izy ireo dia tsy avelany hipoitra mora foana ny flora bakteria (tadidio fa tena ilaina amin'ny aquarium).
Haingo Hygger ...
EmoursTM hazo rendrika,...
Raha te-hikasika ny ranomasina ny aquarium anao dia afaka misafidy hazo ianao. Betsaka ny vongan-dainga amin'ny takona-maso any amin'ny fivarotana biby fiompy na Amazon izay maka tahaka tsara ny natiora, ary ankoatr'izay, tsy simba ny sentetika dia afaka manome fialofana tsy voafetra ho an'ny trondroo.
Na dia azo atao aza ny mampiasa hazo voajanahary ao anaty aquarium, dia mila mitandrina be ianao, satria olana saro-pady io. Ny karazan-kazo sasany, ohatra, dia mamoaka asidra ao anaty rano izay mety hahafaty ny trondroo. Mitsingevana ihany koa ny ankamaroany, ka tsy maintsy hitsabo azy ireo aloha ianao na hanoro azy ireo hatrany ambany ny vato, ohatra. Noho izany, tsy tokony hampiasaina kitay hazo nangoninao ny tenanao ianao, nefa tsy hitanao ny karazany sy tsy manisy fiheverana raha mampiasa pestiside izy ireo.
Zavamaniry Vibury ...
Zavamaniry tsy fantatra DE...
Zavamaniry Aquarium, ...
Ireo zavamaniry Izy ireo dia iray hafa amin'ny hevitra mahazatra indrindra handravahana ny aquarium antsika. Izy ireo dia mety ho artifisialy na voajanahary, araka ny ho hitantsika etsy ambany.
Tsy misy fisalasalana izy ireo no mora karakaraina (ankapobeny satria tsy mila fikarakarana izy ireo). Ho fanampin'izany, mirona hanana loko miloko kokoa izy ireo ary manome fialofana ho an'ireo trondroo nefa tsy matahotra ny hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamany. Fanampin'izany, tsy maty na lo izy ireo, izay afaka mamoaka sombin-javatra ao anaty rano mampiakatra ny haavon'ny azota, izay mety hiteraka adin-tsaina sy harary ny hazandranoo.
Na dia tsy soso-kevitra be ho an'ny vao manomboka aza izy ireo zavamaniry voajanahary koa manana ny tombony. Ohatra, karakarao tsara ny famoahana oksizena rehefa mampiasa CO2, zavatra izay atolotra anao foana ho an'ny hazandranoo (tadidio fa mila oksizenina izy ireo mba hiainana). Na izany aza, rehefa mividy zavamaniry voajanahary dia alao antoka fa tonga ao anaty siny tsy misy volo izy ireo mba tsy hahita stowaways, toy ny sifotra, izay afaka manafika ny aquarium anao.
Nobby, vato haingo ...
Boxtech Kit misy vato...
Ny vato, toy ny vatan-kazo, dia iray amin'ireo kilasika fanaingoana ny aquarium rehetra. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny toerana maro ary, amin'ity tranga ity, ny fampiasana vato voajanahary dia tsy mampidi-doza toy ny an'ny hazo. Na izany aza, mba hahazoana antoka fa azo antoka ampiasaina izy ireo, alenteho anaty rano mandritra ny andro vitsivitsy dia jereo raha tsy niova ny pH.
Fitsapana iray hafa hijerena fa ilay vato nofidinao ho an'ny aquarium anao dia tsy misy asidra afaka mamono ny hazandranonao, haingana kokoa aidino vinaigitra ny vato. Raha tsy manao na inona na inona ianao dia milamina ny vatobe. Etsy ankilany, raha miboiboika dia misy asidra ao aminy, ka tsy tokony ampidirinao ao anaty akarium. Ity fitsapana ity dia azo atao koa amin'ny asidra hydrochloric, saingy mampidi-doza kokoa izy io (lazaiko aminao avy amin'ny zavatra niainako: ny rahavaviko, izay geolojika, dia namela rano feno tavoahangy feno ary saika maty aho).
Amidy amin'ny toerana maro ny haingon-trano artifisialy ary, ny tsara indrindra dia vonona tanteraka ho rendrika izy ireo, ka tsy hijaly noho ny trondroo ianao. Ary raha tsy ampy izany, manome sarivongana isan-karazany mahavariana izy ireo, indrindra amin'ireo sokajy malaza indrindra (mpanamory, tratra harena, sambo rendrika, satroka mpisitrika, rava, trano atsinanana, Buddhas ...) ho an'ireo sary an-tsaina bebe kokoa (Stonehenge, mananasy SpongeBob, Star Wars AT-AT, volkano, holatra, karandoha ...).
Afisy PVC adhesive...
Raha te hanome halaliny lalina ny aquariumanao ianao, dia vahaolana ny wallpaper. Tsy nolokoina akory izy ireo, fa sary pirinty izy ireo, mazàna amin'ny taratasy miraikitra, izay azonao apetaka ao ambadiky ny aquarium (mazava ho azy ny ivelany). Ny ankamaroany dia miendrika toy ny fanambanin'ny ranomasina, na dia afaka mahita ireo sary tany am-boalohany misy ala, riandrano aza ianao ... Na dia tsy mahita sary tianao aza ianao dia afaka misafidy pirinty iray. Amporisihina mafy ianao fa amin'ity tranga ity dia hosaronanao izy io, satria na dia tsy ao anaty rano aza izy dia ho lena.
Inona no tsy hatao anaty aquarium
Misy iray fitaovana maromaro izay tsy tokony hatao anaty rano, araka ny ho hitantsika etsy ambany, ary mety halaim-panahy hilentika ianao. Ohatra:
Tsara ny vatohara, fa mazàna dia feno poizina sy bakteria izy io izay mety hanimba ny tontolo iainanao an-dranomasina. Ho fanampin'izany, ny haran-dranomasina maty dia manana loko manjavozavo ary ratsy tarehy, mahantra, noho izany dia tsara kokoa ny misafidy safidy artifisialy fa mangatsiatsiaka kokoa sy mahafinaritra ny maso.
Ireo singa voajanahary tsy voatsabo
Alohan'ny nanomezanao hevitra vitsivitsy anao hitsaboana ireo hazo sy vato voajanahary tianao ampidirina amin'ny rano. Na izany aza, raha tsy azonao antoka ary zazavao amin'ity sehatra ity ianao dia aleonao mitady vato sy kibay artifisialy.
Haingo tsy voaomana
Ny Indiana plastika dia mety ho mahafinaritra be ao amin'ny aquarium anao, saingy tokony ho fantatrao fa tsy haingo entina alentika anaty rano izy io, noho izany mety hanapoizina ny trondro sy ny zavamaniry anao. Toy izany koa no mitranga amin'ny "haingon-trano" hafa izay tsy mbola notsaboinao na tsy natao ho toy izany, ohatra, ny vola madinika, mineraly, vera voaloko ...
Ahoana ny fomba fanadiovana ny haingon-trano
Matetika, araka ny hita, tsy maintsy manadio ireo haingon-trano anananao ao anaty akarium ianao. Ho azy:
voalohany, ahidrano madio sy zavamaniry artifisialy izay anananao ao amin'ny Aquarium tsy manala ny rano sy amin'ny borosy. Aza dia masiaka loatra raha tsy te-hanafatra azy ireo ianao.
Luego, diovy amin'ny vatokely ny vatokely. Amin'ity fomba ity dia tsy hanadio ireo vato fotsiny ianao fa ho afaka hampiasa azy io koa hanova na hameno ny rano.
By ny lalana raha manadio ny ravaka ao anatiny ianao dia aza mampiasa borosy mafy be raha tsy te-hikaoty ireo sarivongana ianao.
Na dia izany aza dingana vitsivitsy tena tsotra, ny marina dia izy io dia iray amin'ireo zavatra miasa mafy indrindra rehefa mitazona ny aquarium, fa tena ilaina kosa mba hitandroana ny fahadiovana.
Farany inona milay ny aquarium anao na toy ny amalgam misy zavatra an'arivony izay tsy ahitan'ny trondro, dia tsy miankina amin'ny vola laninay fotsiny na amin'ny isan'ny tarehimarika napetrakay. Ohatra:
Diniho ny toerana inona no anananao ary inona no tianao hapetraka (zavamaniry artifisialy na voajanahary, tarehimarika ...)
Raha eranomasina cosystem, lohahevitra ho an'ny ranomasina no ho tsara kokoa, raha toa ka rano velona izany, renirano.
Eritrereto hoe karazana inona vatokely na fasika mifanaraka amin'ny hazandranoo.
Aza atambatra entana maro raha tsy te-hanasatra ny trondroo ianao na hanana aquarium feno loatra. Ny zavamaniry voajanahary koa dia mila toerana malalaka.
mihevitra ampio singa vitsivitsy misy lavaka izay ahafahan'ny trondro miafina.
Ny masontsivana iray izay mandeha tsara dia ny misafidy hametraka sombin-javatra lehibe iray eo afovoany ary ireo kely kokoa amin'ny farany.
Indraindray dia Manoro hevitra anao ny hamindranao ireo sarivongana sy haingon-trano eo amin'ny farany ambanin'ny aquarium (mazava ho azy fa tsy mihatra amin'ny zavamaniry voajanahary) mba hanomezana karazany ho an'ny tenanao sy ny trondroo.
Manantena izahay fa ireo hevitra handravahana aquarium ireo dia nanjary torolàlana hahatonga ny tenanareo ho tena mahafinaritra. Lazao aminay, efa nandavaka aquarium ve ianao sa mahatsiaro very? Moa ve ianao zavamaniry voajanahary na artifisialy kokoa? Misy haingon-trano tena tianao ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Hevitra 6 handravahana aquarium